The Hacks masaf Review - Masaf Of The Day
In aad search for xeeladaha fiican u leedahay in hawlgal ganacsi adag, waxaad u iman doonaa ay weheliyaan xad ah qurbaanno yar on webinars web iyo dib u eegista oo ku saabsan sida ugu wanaagsan ee ay u qabtaan.
Waxa ugu fiican ee aad samayn karto oo arrintan ku saabsan xad-dhaaf ah u duulay macluumaadka waa degaan up for mid adiga kuu gaar ah oo ay isticmaalaan macluumaadka sida ugu wanaagsan ee aad awoodid.
Runta waxa ay tahay in dib u eegis hacks masaf ma kula hadli doonaa oo ku saabsan xoogga ama gaari ka kooban.
Waxaad u baahan tahay si ay u la kulmaan naftaada by.
Waxaad awoodi kartaa, si kastaba ha ahaatee, lacag bixisid si aad qaybaha oo lagu faah faahinayo content qurbaanka ugu muhiimsan iyo sida anshaxa dareenka yihiin dhaqanka ee suuq ku lagacna aad u.